Ku Calaamadee Maqaallada Tanner Martech Zone |
Maqaallada by Calaamadee Boorsada
Iskuduwaha iyo COO, Mark wuxuu maareeyaa iibka iyo howlaha Qwilr, wuxuuna ka caawiyay dhisida koox iib ah gebi ahaanba fog, adduunka oo dhan loo qaybiyo. Google, wuxuu ka caawiyay abuuritaanka iskaashi badan oo daabacayaal ah oo horseeday buugaagta Google Play iyo buugaag ku saabsan Android. Wuxuu dib ugu noqday Australiya sanadkii 2013, wuxuuna bilaabay Qwilr asaga oo ah aasaasaha Dylan Baskin si uu dib ugu cusbooneysiiyo isgaarsiinta ganacsiga dukumiintiyada.
Khamiista, Diseembar 17, 2020 Khamiista, Diseembar 17, 2020 Calaamadee Boorsada
Xiriirka macaamiisha ayaa halbowle u ah ganacsi kasta. Si kastaba ha noqotee, iyada oo COVID-19 ay ku qasbeyso dhimista miisaaniyadda 65% ee suuqleyda, kooxaha ayaa loo xilsaaray inay wax badan ka qabtaan wax yar. Tani waxay ka dhigan tahay inaad awood u yeelan karto inay soo saarto dhammaan suuq-geynta iyo dammaanadda iibka ee miisaaniyadda hoos loo dhigay, iyo inta badan iyada oo aan lahayn raaxada naqshadeeye ama hay'ad soo saarta. Ka shaqeynta fog iyo iibinta sidoo kale macnaheedu waa iibinta iyo kooxaha suuqgeyntu mar dambe kuma tiirsanaan karaan xirfadaha wada xiriirka qofka si ay u kobciyaan